Ibsa haala adeemsa araara dhaabota ABO koree Qeerroo Oromoo irraa kenname – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooIbsa haala adeemsa araara dhaabota ABO koree Qeerroo Oromoo irraa kenname
Qeerron Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda irraa walitti dhufuun dhaabota ABO tokkoomsudhaaf ji’oota 10 oliif sochii araaraa gochaa turuun ni yaadatama. Adeemsi koreen Qeerroo araara dhaabota ABO tokkoomsudhaaf dhaabbate gochaa ture guyyaa hardhaa adeemsa isaanii xumuruun haala adeemsa araara hanga ammaa ture irratti ibsa kennee jira.
Araarri dhaabota ABO Giddutti bu’uun dhaabonni ABO ABOT, ABOQC fi ABOSG walitti dhufanii akka tokkoomaniif ji’oota hedduuf deemamaa ture. Adeemsa kana keessatti dookumantiin akka araaratti dhihaatee dhaabota hundaaf kenname ABOn walitti deebi’uun korri sabaa waammamuun filannoon akka gaggeeffamuudha. Adeemsa araaraa kana keessatti dhaabonni ABOQC fi ABOT koree araaratiin araara deemamaa jiru cinaatti jechuun ofumaa giddumaan walitti dabalamne jechuun ibsa kennuuf yeroo jedhanitti dhaabonni kuni lamaan walitti tokkoomun gaarii tahullee hanga ABOSG wajjiin walitti tokkoomanitti ibsa akka hin kennine koreen araaraa kuni gaafatullee isaan didanii miidiyaatti bahanii nuti tokko taane jechuun ibsa kennan. Achi booda dhaabonni ABO lamaan walitti tokkoomne jedhanii fi ABOSG hanga walitti tokkoomanitti kora kopha kophaatti akka hin waammanne koreen kuni gaafatullee diduun kophaatti kora waammatan.
Adeemsa araara kanaaf danqaa guddaa kan tahe qaamonni araara kana hin barnaanne harka keessa galfachuudha.
ABOT keessa osoo jiranuu qaamonni mootummaa wajjiin walii galtee gochuun muudama mootummaa keessaa qaban dhaabonni kuni lamaan akka hin tokkoomne gochaa turaniiru. Ifatti qaamni ABOn akka deebi’ee hin tokkoomne barbaadu ABO dadhabsiisudhaaf isaan lamaan walitti tokkoomudhaan Soodaretti kora waammatan cinaa dhaabbachuun ABO isa kaanitti duuluutu muldhata.
ABO_Abbaa Nagaa Jaarratiin hoogganamu keessa namoonni hedduun mootummaa waliin walii galtee gochuun aangoo mootummaa keessaa kan qabaniidha.
I/A hayyu duree ABO Abbaa Nagaatin hoogganamuu tahuun gurbaan kan filame #Bilisummaa Birhanuu Ararsaa#Damee_tikaa mootummaa tahee hojjachaa jira. Gurbaan kuni gamtaa barattootaa keessa yeroo turetti araara dhaabota ABO tiif warra deemaa turan keessaa tokko tahee osoo jiruu dhaabonni kunniin lamaan osoo hin araaramin warra isa kaanitti dabalamuun aangoo fudhate. Gama biroon immoo mootummaa keessatti humna tikaa tahee hojjachaa jira.Danqaa guddaa araara ABO kan tahaa jiru ABOn inni kuun kan mootummaadhan deeggaramuu fi gartokkeen namoota isaan keessatti argamanii kan mootummaa irraa muudama aangoo qabaniidha. Namoonni mootummaa keessatti galanii mootummaa wajjiin hojjatan kunniin afaanin tokkummaa barbaanna jechaa ABO warra kaanitti mootummaa wajjiin duulu. Tokkummaa ABO tiif namoota deemaa turan keessaa Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu tokko yoo tahu shira itti xaxuun abbootii Gadaa keessaa baasan. ABOn Daawud Ibsaan hoogganamu irratti duula gaggeessudhaan ABO isa kaan leellisuun qaamota mootummaa fi garee mootummaan ijaaree akka ABOn hin tokkoomne wantoota godhaniidha. Kaayyon isaa ABO bakka lamatti qoodudhaan laamshessuun dhabamsiisuudha. Gareen Qeerroo Oromoo araara kanaaf socho’aa turre dhaaba kamuu irratti duullee balleessuu osoo hin taane rakkoo isaan gidduu furuudha.
Walumaa galatti Qeerron Oromoo ji’oota hedduuf kutaalee Oromiyaa hunda keessaa walitti dhufuun araara dhaabota ABO milkeessudhaaf socho’aa turre haala amma jiruun adeemsa araaraa kana itti fufuu waan hin barbaannef adeemsa araaraa keenya dhaabnee jirra. Uummanni Oromoo kana hubachuun murtii isaa murteeffachuu akka dandahu gamanumaan hubachiisna.
jaalataa lammii says:
beekaa rafaa kaasun nama dhiba, dhaabni kun martinuu waan oromoof tahu nibeeka ,tu isaan barbaachisa, wanni oromoof tahu tokkummaadha , osoo beekanuu dantaa isaanii taummatarra caalchisuun walirratti ol,aantummaa laallachaa jiru , amma wanni isaanirraa barbaachisu haalduree tokko malee walii galanii diinatti karaa cufuu qaban filannoof of qohpeessuu qaban diina waliin walirratti doggomuu osoo hintaane sagalee tokkoon diina injifachuuf irratti hojjechuutu isaan barbaachisa,